अन्तरिक्षमा घुम्न जाने हाे ? तयार हुँदैछ 'स्टारसिप'- विज्ञान र प्रविधि - कान्तिपुर समाचार
अन्तरिक्षमा घुम्न जाने हाे ? तयार हुँदैछ 'स्टारसिप'
पुस ३०, २०७५ कान्तिपुर संवाददाता
काठमाडौँ — मानिसलाई अन्तरिक्ष भ्रमण गराउने रकेटको 'फर्स्ट लुक' सार्वजनिक भएको छ । मान्छेलाई मंगल ग्रहमा लैजाने महत्वकांक्षी योजना बोकेका अमेरिकी रकेट निर्माता कम्पनी स्पेश एक्सका सीईओ एलोन मस्कले रकेटको 'प्रोटोटाइप' सार्वजनिक गरेका हुन् ।
उक्त रकेटको नाम स्टारसिप रहेको छ। रकेटको परीक्षण उडान गर्ने तयारी भइरहेको मस्कले जनाएका छन्। स्टिल कलरमा पेन्ट गरिएको उक्त रकेटले कुनै दिन मानिसलाई पृथ्वीबाट चन्द्रामा र चन्द्रामादेखि मंगल ग्रहमा लैजाने बताइएको छ।
रकेटको पहिलो टेस्ट फ्लाइट केही सातामा अमेरिकाका टेक्सास राज्यमा हुने बताइएको छ। मस्कले आफ्नो ट्विवटरमा रकेटको तस्बिर राख्दै भनेका छन्, 'टेस्ट फ्लाइटका लागि स्टारसिप स्पेश एक्सको लन्चिङ् साइटमा तयारी अवस्थामा छ। 'रकेट 'सव अर्बाइटल भीटीओल टेस्ट'का लागि तयार भएको छ र 'अर्बाइटल भर्सन' केही ठूलो हुने मस्कले बताएका छन्।
फिजिक्स डट ओरजीले भविष्यमा यही मोडलको रकेटले मानिसलाई बोक्ने भएपनि मस्कले सार्वजनिक गरेको प्रोटोटाइप केही छोटो रहेको जनाएको छ। यो रकेटलाई वायुमण्डलमा सयौँ किलोमिटर परीक्षण उडान गराएपछि पृथ्वीमा अवतरण गराइने बताइएको छ।
स्पेश एक्स अन्तरिक्षयात्रीहरुलाई चाहिने आवश्यक सामग्रीहरु अन्तर्राष्ट्रिय अन्तरिक्ष केन्द्रमा आपूर्ति गर्दै आएको छ। उसको फल्कोन-९ र ड्रागन कार्गो क्यापसुलबाट सामाग्रीहरु इन्टरनेशनल स्पेश स्टेशनमा लैजाने गरेको छन्।
प्रकाशित : पुस ३०, २०७५ १६:०२
पुस ३०, २०७५ रासस
काठमाडौँ — मर्मतका लागि ५८ दिनदेखि मलेसियामा रहेको नेपाल वायुसेवा निगमको बोइङ ‘गण्डकी’ भोलि मङ्गलबार नेपाल ल्याइने भएको छ ।
“दुई महिनादेखि बोइङ ममर्तका लागि मलेसियामा छ । बिक्रीका लागि आर्थिक मूल्याङ्कन भइसकेको छ । ‘भ्यालुएसन’ भइसक्यो, यो पनि ‘कन्डिशनल’ छ, सात करोड ६० लाख डलर मूल्य पुग्छ', निर्देशक श्रेष्ठले भने ।
प्रकाशित : पुस ३०, २०७५ १५:४४